Soo dejisan AIMP 4.11.1841 – Windows – Vessoft
AIMP – ciyaaryahan audio in ay taageertaa badan oo qaabab audio ah. software wuxuu bixiyaa loo maqli karo oo tayo sare leh oo ka mid ah files audio habka processing dhawaaqa ee heerka ku habboon. AIMP kuu ogolaanayaa inaad la playlists badan shaqeeyaan, maamuli lahayd files music iyo qaban tirakoobka loo maqli karo ee. software ka kooban barbaraha ka dhisay-in iyo set oo ah saamaynta dhawaaqa. AIMP waa awoodaa inuu badalo qaabab audio iyo edit ah qaabab aasaasiga ah ee tags. Sidoo kale AIMP ayaa module gaar ah in ay ku xidhmaan qalabka dheeraadka ah iyo kordhiyo shaqeynta ee ciyaaryahanka.
Taageerada ugu badan ee qaabab audio ah
set A of saamaynta audio
Shaqo la playlists badan
Badalidda qaabab audio